Ny sary nomerika VS ny sary analog | Famoronana an-tserasera
Teknolojia horonantsary misy ankehitriny dia nomerika. Raha mbola tsy matotra izy ireo dia nilaza ny manam-pahaizana fa ny horonantsary nomerika dia ratsy kokoa noho ny analog, satria ity farany dia misy fampahalalana bebe kokoa. Na dia marina aza izany tamin'ny voalohany dia tsy marina intsony izany ankehitriny. Ny fandrosoana natao tato anatin'ireo taona faramparany dia nahafahana naka vaovao bebe kokoa tamin'ny sary tsirairay avy ary azo ampiharina amin'ny sehatry ny matihanina sy amin'ireo an'ny amateurs. Vao folo taona lasa izay, ireo mpampiasa dia nanana rafi-pandraketana horonantsary analog izay mahavita misolo tena andalana 250 fotsiny, fa amin'ny rafitra nomerika ankehitriny, sary azo zahana mihoatra ny 500 no azo, izany hoe, mihoatra ny avo roa heny. Ny sary an-tsary amin'izao fotoana izao dia nomerika ihany koa mandritra ny fizotrany manontolo, manomboka amin'ny fakana sary amin'ny alàlan'ny fandefasana, ny fitehirizana ary ny fanovana, ka hatramin'ny fisehoana amin'ny efijery farany farany. Zava-dehibe io. Raha toa ny fahazavana an-tsary sy ny famaritana ny sary dia very tamin'ny dingana tsirairay ary isaky ny fanodikodinana ny foto-kevitra voalohany, miaraka amin'ny horonan-tsary nomerika dia tsy misy karazana aberration na fitafiana eo amin'ny taranaka mifandimby.
Araka ny efa fantatrao, ny teny hoe famokarana horonan-tsary dia ampiasaina hamaritana ny valin'ny fanodinkodinana nifanesy nandraisana ilay horonan-tsary. Rehefa manary ny tany am-boalohany amin'ny pc isika dia manana taranaka voalohany. Raha manitsy ny lokon'ny sary isika mba hanafoanana mpilalao mavo ohatra, ny vokatr'izany dia horonantsary ho an'ny taranaka faharoa, sns. Amin'ny horonan-tsary analogy taloha, arakaraka ny andehanan'ny taranaka dia mampihena ny kalitao.
Ny Camcorder dia manana fomba hafahafa fakana sary. Tsy raisin'izy ireo ho toy ny faritra mitohy araka ny efa fantatrao izy ireo. Ampiasain'izy ireo izany amin'ny alàlan'ny pixel, izay refy fandrefesana farafahakeliny. Mba hanaovana izany dia zarain'izy ireo ho ampahany kely ny sary ary omena ny soatoavina matematika isan-karazany amin'izy ireo arakaraka ny hamafin'ny hazavana sy ny loko manjaka ao amin'ny sombintsombiny tsirairay. Ny piksela tsirairay dia mifanaraka amin'ny sela amin'ny CCD. Ny fampahalalana avy amin'ny sela rehetra dia atambatra ao anaty fonosam-baovao mifanentana amin'ilay sary feno mba hahafahan'ny mpanodin-tsary mamerina azy io avy eo. Ny fanarenana dia tanterahina isaky ny teboka, mametraka antsika milamina sy miaraka amin'ny loko sy ny hamafiny. Izy io dia dingana iray izay vita ao anatin'ny iray alina amin'ny iray segondra.
Ataovy ao an-tsaina fa raha te hahatakatra ny fambara amin'ny horonan-tsary dia tsy maintsy mahafantatra hevitra roa ianao: luminance and chrominance. Ny fahazavana dia maneho ny fahazavan'ny famantarana, zavatra toa ny sary monochrome miaraka amin'ny haben'ny volondavenona. Ny Chrominance dia manome fampahalalana momba ny hamafin'ny lokon'ny sary, fa amin'ny alàlan'ny habetsaky ny tsirairay amin'izy ireo loko voalohany: mena, maitso ary manga.
Araka ny hitanao dia sary no resahina eto fa tsy horonan-tsary, toy ny hoe maka sary ny camcorder; Tsy ho lavitra ny zava-misy ianao raha izany no fandikanao azy. Ho fantatrao fa ny sarimihetsika dia tsy sary mihetsika, fa ny haingana dia haingana 24 frame isan-tsegondra. Noho ny fisehoan'ny fiheveran'ny olombelona Fikirizana amin'ny fahitanaTsy afaka mahita an-tsary an-tsary ireo sary ireo izahay fa mahita azy ireo ho toy ny hetsika mitohy. Mahaliana izany satria na dia taorian'ny horonantsary sy fahitalavitra am-polony taona maro aza dia nianarantsika ny manavaka ireo sary mihetsika ireo amin'ny zava-misy, ireo mpijery voalohany izay nanatrika famoahana horonantsary dia nitsoaka nihorohoro talohan'ny fiaran-dalamby izay nankany amin'ny efijery, satria mbola tsy nianatra namantatra izy ireo ny sary sinema amin'ny tena izy. Raha ny marina dia nitranga izany tamin'ny famoahana ny firaketana ny sarin'i Lumiere brothers «LFahatongavana ny fiaran-dalamby mankany amin'ny tobin'ny la ciotat»
Ny marina dia mitovy ny horonan-tsary sy horonan-tsary, na dia miovaova aza ny haitao amin'ny fakana sary. Emulsion volafotsy no ampiasaina amin'ny sinema, raha ny video kosa dia manararaotra ny fahafahan'ny hazavana hivadika ho herinaratra ary ny mifamadika amin'izany. Na izany aza, rehefa mijery sarimihetsika horonantsary isika dia tsy mitohy izany. Raha ny tena izy dia mijery sary nifandimbiasana sary niomerika isika, amin'ny taha 25 farafahakeliny. Ny antony dia any Espana no ampiasaina ny rafitry ny fahita lavitra PAL (Andalana mifandimby dingana), izay maneho ny sary amin'ny tsipika marindrano 625, ary mampiseho sary 25 isan-tsegondra. Azo antoka fa efa naheno momba ny rafitra koa ianao NTCS (Komitin'ny rafitra fahitalavitra nasionaly), nalefan'i Etazonia sy Japon, izay mampiseho sary 30 isan-tsegondra isaky ny 575 andalana. Ny manam-pahaizana dia miantso ny tsirairay amin'ireo sary ireo ho "sary", ny fandikana ny teny anglisy filanjana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny sary nomerika VS ny sary analog
Ainara dia hoy izy:
Tena mahaliana. Misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Ainara